သူပုန်ဝင်စီးနေသော ရွာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinion - Op-ed » သူပုန်ဝင်စီးနေသော ရွာ
Posted by စဆရ ႀကီး on Jul 5, 2012 in Opinion - Op-ed | 21 comments
ရွာထဲတွင် သူပုန်တွေ သောင်းကျန်းနေပါ၏။
ရွာ၏အစဉ်အလာများ ပျောက်ဆုံးနေသကဲ့သို့ အမာခံများလည်း တစ်ဖြုတ်ဖြုတ် ကြွေလွင့်သူတွေကကြွေလွင့်၊ တစ်မြေရပ်ခြားသို့ ရှောင်ပုန်းသူကပုန်းနှင့်။ ရွာထဲတွင်တော့ အတော်လေးစည်ကားနေသေးသည်။ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းများမှာတော့ မရှိတော့သလောက်ပင်။ ဘယ်ကရောက်လာမှန်းမသိသော လူတစ်ကာ၏ ရွက်ဖျင်တဲလေးများသာ နေရာတစ်ကာ မြင်နေရပြန်သည်။ အရင်ကထက် အသံနည်းနည်းပိုကျယ်လာသည်။ တစ်ချို့က လက်လုပ်ဂျင်ကလိလေးများဖြင့် မထိတစ်ထိ ပြစ်ကြ၏။ တစ်ချို့ကျပြန်တော့လဲ ကျည်မပါသည့် သင်္ကြန်အမြှောက်ကြီးတွေ တစ်ဂျိမ်းဂျိမ်းဖြင့် ပြစ်နေကြ၏။ တစ်ချို့ကမူ ဟိုကရတာလေးယူ၊ ဒီကရတာလေးယူနှင့် မပါဝင်ဘဲ ရှိလိုက်ရလေမည်အလား သူတစ်ချက်ဆို ငါနှစ်ချက်၊ သူလုပ်တာ အားပေးထောက်ခံ၊ ကိုယ်လုပ်တာ ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကြရန် ဆွယ်ကြပြန်သေးသည်။ ထိုသူများ၏ နောက်တွင်တော့ကား အတိုအစလေးများ တစ်ချက်စီနှင့် ဝေစုခွဲဝေယူကြပြန်သေးသည်။
သက်ကြီးဝါကြီးလဲမသိ၊ ဂုဏ်သရေရှိလဲမသိ၊ ပညာရှင်မှန်းမသိပဲ လူစု၊ လူဝေးဖြင့် ဝိုင်းပြောကြသည်။ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများမှာမူ ထုတ်ပြန်ထားသည့် တည်ဆဲဥပဒေများ သူတို့နှင့်မဆိုင်သည့်အလား အနည်းငယ်မျှပင် ရာဇသံပေးသည်ဟုမကြားမိသေး။ ရွာကိုမီးရှို့ပြီးထွက်သွားကြသူများမှာလည်း အပြုံးမပျက် ပြန်ဝင်လာကြပြန်သေးသည်။
ဒေသခံများမှာမူ ကျည်လွတ်ရာသို့ အရေးပေါ်ရှောင်ပုန်းနေကြသည်။
(ဤသည်မှာကား Post တစ်ပုဒ်ပင် ဖြစ်လေတော့ပြန်သည်တကား)
အပေါ်က ကွန်မင့်တွင် နာမည်မှားသွားပါသည်။
May flower ဖြစ်ပါသည်။
please delete my first comment!
ဆရာရေ… ခေါင်းစဉ်ကြီးက တမျိုးကြီးလားမသိဘူးနော်…
ရပ်ရွာထဲမှာ ရောလာပြီး ရပ်ရွာကောင်းကျိုးများသည်ပိုးကြဖို့…ဆိုတာမျိုးနဲ့ပြောတာက ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ။
““သူပုန်ဝင်စီးနေသောရွာ””ဆိုတော့ ယခုရွာထဲမှာ လှုပ်ရှားနေသူတွေဟာ….
စည်းကမ်းဆိုတာတွေကိုလည်း ဖတ်ဖြစ်ဦးမှ ။ များသော အားဖြင့်က မဖတ်ဖြစ်ကြဘူးလေ။
ဒီလို ဘဲ ရွက်ဖျင်တဲလေးများမှ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းများဖြစ်အောင် ဝိုင်းဝန်းတည်ဆောက်ပေးကြပါစို့လားဗျာ….
ဒီရွာလေးမှာတောင် ကျွန်တော်တို့ မလုပ်ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင် အပြင်လောကကြီးမှာ …. ဝူး …
မိဘူး။ ကျွှန်မရေးတဲ့ ပိုစ့်တွေကိုဖတ်ကြည့်ပါ ကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း ကျွန်မကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့
တာတွေများပါတယ်။ ဒီတော့ကာ.အရင်ကော်မန့်ပေးတာအားလုံးကိုထိခိုက်သွားတယ်ဆိုရင် ဒီနေရာကနေ
တောင်းပန်ပါတယ်။ နောင်လည်းကျွန်မ ဒီရွာထဲမှာစာလည်းဆက်မရေးတော့ပါဘူး မန့်လည်းမမန့်တော့ပါ
ဟာ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျ။ မလုပ်ပါနဲ့။ သရဲအကြောင်းတွေ ဆက်ရေးပါဗျ။ တကယ်ပြောနေတာ။ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းဆိုတဲ့ ဘယာနကရသ ကတကယ်တော့ အရသာတမျိုးဗျ။
အဲံလိုတွေမလုပ်ရဘူးလေ မမေဖလားဝါးကလည်း စိတ်ထိခိုက်မှုလေးတွေကဖြစ်တက် စမြဲပါ အဲ့လိုတယောက်တပေါက် အပြစ်ပြောနေရတာကို က အမှန်ကိုပြင်ပေးတယ်လို့မှတ်ပေးလိုက်ပါမမရယ်နော် ရေးတင်ပါပို့စ်လေးတွေ စနိုးစောင့်နေမယ်နော် မမပို့စ်လေးကို မြန်မြန်လေးတင်နိုင်အောင်လို့ဆုတောင်းပေးမယ် အားမငယ်ရဘူး စိတ်မဆိုးရဘူးနော်။။။။
မာမီပုကို တုတ်တစ်ချောင်းပေးပြီး လွှတ်လိုက်မယ်လေ…
ဝင် ရောက်ဖတ် ရှု သွားပါတယ်
ဟုတ်ပ Mayflower ရေ… မရေးနဲ့ မမန့်နဲ့တော့… သူတို့အတွက် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေတယ်ဆိုမှတော့… အိုးကမပူ စလောင်းက ပူနေကြတယ်…။ မြေတောင်မြောက်ပေးမယ်မရှိဘူး… သူပုန်တဲ့ဗျ…။
ပြောရင်း ဆိုရင်း ဖြစ်ကြပြန်ဘီ
ရှိုးလွင်လွင် သီချင်း ဆိုပြမယ်..နားထောင်မား..
(ထောင်ရင် သားရေပင်းနဲ့ ပစ်မယ်.. အဲ့လေ. …)
အိုး နေနိုင် သူကြီး ..နေနိုင် သူကြီး ရေ ….
အိုး နေနိုင် သူကြီး ..နေနိုင် သူကြီး ရေ ့….
ဘာမှရှည်ရှည်ဝေးဝေး ကျောနေဝူး ဒဂယ်တော့ အဲ့သပုံဂ နာပဲ…..
သတ်တိချိယင် ကလေးဒွေထွက်ဂဲ့ အလေးမပြိုင်မယ်……
ရွာဂိုသိမ်းပီးယင် မြေကွက်ရိုက်ပီး စက်မှုဇုံဂိုရောင်းစားမယ် နာ့တို.မဟာဗျူဟာဂျီးဂို စပီးအကောင်အထည်ဖော်မယ် ပါဂျင်ဒဲ့လူ ကွန်မန်.ပေး ဒါဗဲ….
ဟုတ်တယ်.. လတ်လတ် .. ချကွာ.. သူပုန်ဆိုတာ မနိုင်သေးခင်ပေးတဲ့ နံမည်ပါ…။ နိုင်သွားရင် အစိုးရ ဖြစ်သွားရော…။ အဲဒီအခါကျရင် လတ်လတ်ကို သဂျီး လုပ်ခိုင်းမယ်…။
တစ်နေ့တစ်ခါပါပဲ…အဲလေ မွှားလို့ ..
ဗုဒ္ဓေါ….အနေရ အထိုင်ရခက်အောင်တော့ မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။
ရွာထဲကထွက်မှရွာသား။ ရွာထဲမှာနေရင် သူပုန်ဆိုတော့ကာ ရွာထဲကထွက်ရတော့မလိုဖြစ်နေပြီ။ ရွာ့သံယောဇဉ်နဲ့ရွာထဲဆက်နေပြန်ရင် သူပုန်ဆိုပြီး ရွက်ဖျင်တဲနဲ့နေရအုံးမယ်။ အဲဒီတော့ အိမ်ကြီး အိမ် ကောင်းတွေပြန်လာမှပဲ ရွာထဲပြန်ဝင်တာကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ရွာသားလို့ထင်ခံရလဲမနဲဘူး။ [:@]
အော်လူတွေလူတွေ ဘာမှမမြဲတဲ့ လောကကြီးမှာ ဒီရွာလေးတစ်ရွာအတွက်ပြသနာတွေဖြစ်နေရတယ်လို့
ဒီနေ့စာရေးပြီး အိမ်ပြန်ရောက်လို့ သေသွားရင် ရက်လည်တာတောင် ရွာထဲက လူတွေ သိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး ဘဝသံသရာဆိုတဲ့ သီချင်းကို ကြားဖူးတယ်မဟုတ်လား နဲနဲ ဆိုပြမယ်နော်
“ဘဝသံသရာ ရှည်လျား ထွေပြား မနေမနား တသွားတည်းသွားကြတာ
ခရီးပန်းတိုင် မရောက်မချင်း တစ်ယောက်ဆင်း တစ်ယောက်တက် ဆက်လက်ထွက်ခွာလာ”
အဲလိုပါပဲ ဆင်းတဲ့လူဆင်းပြီး တက်တဲ့သူ တက်လိမ့်မပေါ့ ရွာထဲ ကိုလဲ ဝင်တဲ့သူဝင်ပြီး ထွက်တဲ့သူထွက်လိမ့်မပေါ့ အဲဒီမှာ သူကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းသတင်းကျန်ခဲ့မယ်
မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းသတင်းကျန်ခဲ့မပေါ့ ရွာထဲမှာက မကြိုက်ရင် ဝင်မဖတ်လို့ရသေးတယ်
အလုပ်ထဲမှာဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ အဆင်မပြေလဲ သည်းခံပြီးတွဲလုပ်နေရတာက အများကြီးပါနော်
ကဲထပ်ပြီးတော့ လူတတ်ကြီး တရားဟော ကထိကကြီး မလုပ်တော့ပါဘူးနော် ဒီလောက်ပါပဲ.
အခြားသဘုံတော့သိဘူးဗျ ဖုန်းကျော်ဆိုတဲ့လူကတော့ တကယ့်သဘုံလို့တော့ပြောတာဘဲ
သွားလုပ်နေ ဟိုက အာပီဂျီဖိုက်နဲ့လွှတ်ထဲ့လိုက်မှ တစ်စစီဖြစ်နေမယ်
ကျုပ်ကတော့ သဘုံမဟုတ်ဘူး ဒမျ
တစ်ခါတစ်လေ ဘိုင်ပြတ်ရင် ထမိန်လေး ဖိနပ်လေးခိုးတယ်
ရွာထဲမှာ တဖွဖွနဲ့အာပီဂျီကိုင်ဖူးသူ adu lar ဆိုသူ
မှတ်မိနိုင်ပါသည်။ယခု တော့ အဆိုပါ အဒူလာမှာ
Thu Thu /Hnin sai /Tun Tun ဟူ၍အသွင်ပြောင်း
ဥပမာ ပြောတာပါ ကိုရှုူံးရေ။နောက်လဲရှိနေနိုင်ပါ
တရုတ်သဘုံ ကြေးမုံဂျီးတဲ့ဟေ့… ဒိုင်းညှောင့် ဒိုင်းညှောင့် မအေးညွန့် မကြည်ညွန့်……:D